Global Voices teny Malagasy » India : Ny Fanafihana Tao Jaïpur Tantaraina Ao Amin’ny Bilaogy Indiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jolay 2017 10:24 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika (fr) i Claire Ulrich, Miranah
Sokajy: India, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Voina
Tamin'ny 13 Mey 2008, namely ny tanànan'i Jaïpur ny andiana daroka baomba . Araka ny tarehimarika ofisialy, 60 no namoy ny ainy ary 150 no naratra. Namoaka lahatsoratra momba an'i Jaïpur ny bilaogy MyZone  [en], somary mangingina i Jaipur amin'ny maha tanàna goavana azy, ary namaritra ny tahotra nateraky ny fipoahana izy. Nivadika ho dòna ny tsy finoana nandritra ny dimy ambinifolo minitra nitomboan'ny isan'ny maty ho 5 raha toa ka roa teo aloha, raha nitranga tampoka koa ny zava-misy tamin'izany fanafihana izany.
Tsy zava-baovao ao India ny fampihorohoana, ary tanàna maro no efa niharan'ny fanafihana, saingy mbola tsy nisy fanafihana goavana tahaka izany tao Jaïpur. Nampitombo ny faharefon'ny tanàna sy ny olom-pirenena ary ny tsy fahombiazan'ny sampan-draharaha fakàna vaovao ny daroka baomba. Voalaza fa nomanina tany ivelany ny fanafihana. Naneho ny firaisankiny ilay bilaogera avy ao Pakistan  ary manantena fa tsy ho maika amin'ny tsoa-kevitra aloha loatra ny governemanta Indiana ka hiampanga an'i Pakistan.
Niahiahy amin'izay mety hanjo ireo mpiara-miasa aminy ao Jaipiur ny bilaogy Ha's Blog , vondrona Holandey manana fikambanana ao Jaïpur.
Manontany ny antony nahatonga ireo mpampihorohoro hikendry an'i Jaïpur ny bilaogy Hindustaniat  :
Mahita ny tsy fahaizan'ny fitondrana mamaha ireo fanafihana fampihorohoroana teo aloha kosa ny bilaogy Indian Muslims .
Ny bilaogy Off Stumped  koa naneho ny ahiahiny tahaka izany momba ny tsy firaharahian'ny fitondrana. Miantso ireo olon-tsotra mba hitandrina kosa ny bilaogy Cynical Indian . Ny DJ Fadereu  [en] indray namoaka ireo vaovao farany momba an'i Jaïpur tao amin'ny Twitter. Nitsangana ny vondrona Facebook  mba hiresaka momba ny zava-nitranga. Ny firaisankina naseho tao amin'ny tontolon'ny bilaogy dia fahafahana ho an'ny hafa hampiasa aterineto. Feno fiampangana Miozolomana ny sehatra fifanakalozan-kevitra antserasera sasany nosokafan'ireo gazety sy fahitalavitra Indiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/26/104352/
 namely ny tanànan'i Jaïpur ny andiana daroka baomba: http://www.rfi.fr/actufr/articles/101/article_66187.asp
 bilaogera avy ao Pakistan: http://thelandofpure.blogspot.com/2008/05/indian-bomb-blasts-in-jaipur.html
 Ha's Blog: http://hhvo.wordpress.com/2008/05/13/attacks-on-jaipur-a-shamefull-waste-of-human-capacities/
 Indian Muslims: http://indianmuslims.in/jaipur-blasts-method-in-madness/
 Off Stumped: http://offstumped.nationalinterest.in/2008/05/13/jaipur-blasts-a-national-shame/
 Cynical Indian: http://cynicalindian.blogspot.com/2008/05/jaipur-blasts-and-ipl.html
 DJ Fadereu: http://twitter.com/fadereu/statuses/810906001